Raga isku mid mahan wayo alle ayaa waxaa uu u kala dhalshay dareen gooni ah waayo sidaas ayaa ah mid kaliya ee lagu ogaan karo in aysan dadka dhan isku mid aheyn waayo raga waxaa lagu shegaa in ay yihiin kuwo aad u dareen badan marka lagu jir ciyaarta sariirta. Sidaas darteed waxaa jira labo meel oo hadii laga taabto raga uu dareen xoogan ka helayo marka lagu guda jiro kulanka sariirta ama isticmaalka dumarka qofba sida uu u yaqaan waayo dadka dhan isku lahjad mahan oo waa laka duwanyahay. Yanan hadalka in ku daalin yuusan buuraha ila korin waxaa jira ilaa labo meelo uu laga rabo in ay dumarka ogadaan si ay raaxo dhab ah u siyaan raga ay la wadagayaan kulanka sariirta ama ciyaarta sariita sidaas rabto u dhig. 1: Raga waxaa uu dareen gooni ah ka helaa afka hore ee guska ama fanjarta waa in aad meshaan oga raxeysa sida ugu haboon markan sidaas leeyahay waxa jira hab loogu raxeen karo lkn ma haboona in aan halkaan ka sheego. 2: Sidoo kale waxaa raaxo macaan uu ka helaa ninka raga inta u dhaxeysa dabada iyo guska halkaas hadii carabka laga marsho waxaa ku jirta macaan aad u weyn. | shumis.net
Home » galmada » Raga isku mid mahan wayo alle ayaa waxaa uu u kala dhalshay dareen gooni ah waayo sidaas ayaa ah mid kaliya ee lagu ogaan karo in aysan dadka dhan isku mid aheyn waayo raga waxaa lagu shegaa in ay yihiin kuwo aad u dareen badan marka lagu jir ciyaarta sariirta. Sidaas darteed waxaa jira labo meel oo hadii laga taabto raga uu dareen xoogan ka helayo marka lagu guda jiro kulanka sariirta ama isticmaalka dumarka qofba sida uu u yaqaan waayo dadka dhan isku lahjad mahan oo waa laka duwanyahay. Yanan hadalka in ku daalin yuusan buuraha ila korin waxaa jira ilaa labo meelo uu laga rabo in ay dumarka ogadaan si ay raaxo dhab ah u siyaan raga ay la wadagayaan kulanka sariirta ama ciyaarta sariita sidaas rabto u dhig. 1: Raga waxaa uu dareen gooni ah ka helaa afka hore ee guska ama fanjarta waa in aad meshaan oga raxeysa sida ugu haboon markan sidaas leeyahay waxa jira hab loogu raxeen karo lkn ma haboona in aan halkaan ka sheego. 2: Sidoo kale waxaa raaxo macaan uu ka helaa ninka raga inta u dhaxeysa dabada iyo guska halkaas hadii carabka laga marsho waxaa ku jirta macaan aad u weyn.
Raga isku mid mahan wayo alle ayaa waxaa uu u kala dhalshay dareen gooni ah waayo sidaas ayaa ah mid kaliya ee lagu ogaan karo in aysan dadka dhan isku mid aheyn waayo raga waxaa lagu shegaa in ay yihiin kuwo aad u dareen badan marka lagu jir ciyaarta sariirta. Sidaas darteed waxaa jira labo meel oo hadii laga taabto raga uu dareen xoogan ka helayo marka lagu guda jiro kulanka sariirta ama isticmaalka dumarka qofba sida uu u yaqaan waayo dadka dhan isku lahjad mahan oo waa laka duwanyahay. Yanan hadalka in ku daalin yuusan buuraha ila korin waxaa jira ilaa labo meelo uu laga rabo in ay dumarka ogadaan si ay raaxo dhab ah u siyaan raga ay la wadagayaan kulanka sariirta ama ciyaarta sariita sidaas rabto u dhig. 1: Raga waxaa uu dareen gooni ah ka helaa afka hore ee guska ama fanjarta waa in aad meshaan oga raxeysa sida ugu haboon markan sidaas leeyahay waxa jira hab loogu raxeen karo lkn ma haboona in aan halkaan ka sheego. 2: Sidoo kale waxaa raaxo macaan uu ka helaa ninka raga inta u dhaxeysa dabada iyo guska halkaas hadii carabka laga marsho waxaa ku jirta macaan aad u weyn.
Title: Raga isku mid mahan wayo alle ayaa waxaa uu u kala dhalshay dareen gooni ah waayo sidaas ayaa ah mid kaliya ee lagu ogaan karo in aysan dadka dhan isku mid aheyn waayo raga waxaa lagu shegaa in ay yihiin kuwo aad u dareen badan marka lagu jir ciyaarta sariirta. Sidaas darteed waxaa jira labo meel oo hadii laga taabto raga uu dareen xoogan ka helayo marka lagu guda jiro kulanka sariirta ama isticmaalka dumarka qofba sida uu u yaqaan waayo dadka dhan isku lahjad mahan oo waa laka duwanyahay. Yanan hadalka in ku daalin yuusan buuraha ila korin waxaa jira ilaa labo meelo uu laga rabo in ay dumarka ogadaan si ay raaxo dhab ah u siyaan raga ay la wadagayaan kulanka sariirta ama ciyaarta sariita sidaas rabto u dhig. 1: Raga waxaa uu dareen gooni ah ka helaa afka hore ee guska ama fanjarta waa in aad meshaan oga raxeysa sida ugu haboon markan sidaas leeyahay waxa jira hab loogu raxeen karo lkn ma haboona in aan halkaan ka sheego. 2: Sidoo kale waxaa raaxo macaan uu ka helaa ninka raga inta u dhaxeysa dabada iyo guska halkaas hadii carabka laga marsho waxaa ku jirta macaan aad u weyn.